𝐅𝐚𝐦𝐞𝐥𝐚𝐛𝐞𝐥𝐚𝐫𝐚𝐧-𝐤𝐞𝐯𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐧𝐢𝐚𝐫𝐚𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧𝐲 𝐔𝐍𝐈𝐂𝐄𝐅, 𝐂𝐑𝐄𝐌, 𝐂𝐂𝐎𝐂 – Sénat de Madagascar
November 18, 2019 RAMBELO Abel NIRINA
« Situation actuelle des enfants à Madagascar selon l’enquête multi indicateur Cluster Survey ». Izay lohahevitra izay no novoaboasana teto amin’ny Antenimerandoholona ny marainan’ny Alarobia 13 novambra 2019. Nanatanteraka izany ny teknisiana avy amin’ny UNICEF, CREM, CCOC ary mpahay antotan’isa. Tonga nanotrona izany moa ny solotena maharitry ny UNICEF eto Madagasikara Atoa Michel SAINT-LOT.
Nanatrika ny famelabelarana ny Loholona sy ny mpiasa rehetra ary ny Filoha Rivo RAKOTOVAO notronin’ny mpikambana ao amin’ny Birao Maharitra.
Ny famelabelaran-kevitra moa dia niompana indrindra tamin’ny fampahafantarana ny asa aman’andraikitry ny UNICEF izay notontosain’ny teknisianina ao amin’izany rantsan’ny Firenena mikambana izany, ny an’ny CREM sy ny CCOC kosa dia nifandraika tamin’ireo sehatra ara-tsosialy izay tokony laharam-pahamehana sy tokony vatsiana ara-bola mba hisian’ny fampandrosoana ara-ekonomika.
Nambaran’izy ireo ary fa ny sehatra ara-pahasalamana, ny sehatry ny fanabeazana, ny sehatry ny tsy fanjarian-tsakafo, ny sehatry ny rano fisotro, ny fidiovana sy ny fahadiovana ary ny sehatry ny fiahiana ara-tsosialy eto Madagasikara dia mbola ambany ny tahan’ny tetibola ampiasaina amin’izany ka tokony hodinihina ny fampiakarana azy mba ahafahana manatsara ny fari-piainan’ny Malagasy. Nolazain’izy ireo koa fa tokony hatsaraina ny fitadiavana loharanom-bola eto Madagasikara, tokony havadika vola ireo harena ananan’ny firenena, hatsaraina ny fomba fampianarana sns…
Voalaza tao ihany koa fa mbola marefo ny ara-tsosialy satria ambany dia ambany tokoa ny famatsiana ara-bola izany sehatra izany ka izay indrindra no antony izao famelabelaran-kevitra izao, mba hahafahan’ireo Loholon’i Madagasikara mandresy lahatra ny mpanatanteraka ny mba hitsinjovana sy ny mba hametrahana ho laharam-pahamehana ny sosialim-bahoaka satria anisan’ny tafiditra ao anatin’ny politika ankapoben’ny Fanjakana ihany koa ny fanatsarana izany.
Nambaran’ny Filoha Rivo RAKOTOVAO fa tokony hifanojo amin’ny filan’ny vahoaka ny fitsinjarana ny tetibolam-panjakana mba ahafahana mampandroso ny sehatra ara-tsosialy izay mahakasika mivantana ny andavan’androm-piainan’ny vahoaka.
Taorian’izany dia niroso tamin’ny fifanankalozan-kevitra niarahana tamin’ny Loholona izay tonga nanatrika ny fotoana, ka nitondran’ ireto teknisiana ireto fanazavana misimisy kokoa.
« Vondrona Eropeanina: Niarahaba ny Filoha Rivo RAKOTOVAO izy ireo tamin’ny fahavitan’ny fifidianana Filohampirenena.
Manaja ny fahaleovan-tenan’ny Fitsarana sy ny fisaraham-pahefana eto amin’ny Firenena ny Antenimierandoholona. »